Laanta Afka Pidgin-ka oo maanta ku soo biirtay BBC-da - BBC News Somali
Laanta Afka Pidgin-ka oo maanta ku soo biirtay BBC-da
Image caption Weriyeyaasha luuqadda Pidgin
Waxaa maanta oo Isniin ah hawada soo galay laan cusub oo ka tirsan BBC-da qeybta la hadasha dibedaha oo wararka ku tebin doonta afka Pidgin-ka, luuqadaas oo looga hadlo Galbeedka iyo Bartamaha Afrika.
Walow aanan rasmiyan loo aqoonsanayn haddana luuqadda Pidgin-ka waxa ay ka mid tahay luuqadaha sida weyn loogu hadlo guud ahaan gobolkaasi.
Laantan cusub ayaa waxa ay qeyb ka tahay qorshihii ugu weynaa ee lagu ballaarinayo BBC-da qeybteeda dibedda la hadasha wixii ka dambeeyay 1940-kii.
Arrintan ayaa timid kaddib markii ay dowladda Britain 2016-kii ku dhawaaqday inay kordhisay dhaqaalaha ay siiso BBC-da.
Daahfurka Laanta Pidgin ayaa waxaa xigi doona ilaa iyo 10 laamood oo cusub oo ay BBC-du ka hirgelinayso qaaradaha Afrika iyo Aasiya.
BBC-da dibedaha la hadasha ayaa sidoo kale qorshaynaysa inay xog dheeraad ah ku baahiso moobaylka iyo muuqaalada, iyadoo sidoo kale la kordhinayo warbixinada lagu daabaco barasha ay bulshada ku wada xiriirto.
Sidoo kale BBC-da waxa ay sare u qaadaysaa laamaha TV-yada ee Afrika, taas oo ay ka mid tahay in lagu daro 30 barnaamij oo TV ah oo laga sii dayn doono taleefishino xiriir la leh BBC-da oo ku yaal dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika.
Luuqadaha Carabiga iyo Ruushka ayaa sidoo kale waxaa la xoojinayaa.